नेकपा धादिङका सेक्रेटरी गुरुङ गिरफ्तार, रिहा नगरे क्रान्तिले हिसाबकिताब गर्ने हितमानको चेतावनी — Sanchar Kendra
नेकपा धादिङका सेक्रेटरी गुरुङ गिरफ्तार, रिहा नगरे क्रान्तिले हिसाबकिताब गर्ने हितमानको चेतावनी
काठमाडौं । प्रहरीले प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धादिङ जिल्ला सेक्रेटरी बुद्ध गुरुङलाई गिरफ्तार गरेको छ । भदौं ३१ गते विहान पार्टी कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आउँदै गरेको बेला गुरुङलाई प्रहरीले बिनाकारण गिरफ्तार गरेको नेकपाको उपत्यका बिशेष ब्युरोले जनाएको छ ।
उनले भनेका छन्- “के.पी. प्रचण्डहरुलाई थाहा होला नै विश्वमा फासीवादको अभ्यास अध्यास कहीं सफल भएको छैन र नेपालमा पनि सम्भव छैन । तसर्थ हामी चुनौति दिन चाहन्छौं । तपाईहरु सच्चा माक्सवादी मान्नुहुन्छ भने माक्सवादले त जनताको सच्चा व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादलाई मान्छ । तपाईहरुसँग हिम्मत छ ? नढाँटी जनतालाई भन्नुहोस् हामी साम्राज्यवादको सेवा चाकडीमा छौं भनेर । इतिहासमा दुनियामा सच्चा कम्युनिस्टहरु कम्युनिस्टकै विरुद्धमा हत्या, दमनमा उत्रेको कहीं भेटिंदैन । तर तपाईहरु नेपालमा हाम्रो पार्टी क्रान्ति र नेपाली जनताको विरुद्धमा जे हर्कत गरिरहनु भएको छ यो तपाईहरुको आफ्नो इच्छा भन्दा पनि विश्व साम्राज्यवाद तथा विश्व पुँजीवादको इच्छा अनुकूल सेवा गरिरहनु भएको छ ।”
हितमानले प्रचण्ड ओलीहरुसँग हिङ नभएपनि हिङ बाँधेको टालो बाँकी छ भने क्रान्तिकारीहरुका विरुद्धमा यस्ता हर्कतहरु बन्द गर्न जोडदार माग गरेका छन्। गिरफ्तार गरिएका बुद्ध गुरुङलगायत पार्टीका सम्पूर्ण नेता, तथा कार्यकर्तालाई बिना शर्त रिहा नगरे आफुहरुले गर्ने क्रान्तिले सबै कुराको छिनोफानो गर्ने हितमानको तर्क छ ।